इन्डोनेसियाको भूकम्पमा मृ’त्यु हुनेको सख्या ३४ पुग्यो – Gandaki Chhadke
इन्डोनेसियाको भूकम्पमा मृ’त्यु हुनेको सख्या ३४ पुग्यो
By गण्डकी छड्के On Jan 15, 2021
Earthquake frequency wave graph, seismic activity. Vector abstract scientific background. Diagram seismograph, vibration amplitude illustration, can be used for business, science presentation
जाकार्ता । इन्डोनेरियाको सु’लावेसी द्वी’पमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको श’क्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा ३४ व्यक्तिको मृ’त्यु भएको प्रा’रम्भिक जानकारी दिएको छ । यस भू’कम्पमा परेर एक अस्पताल र क’यौँ भवन भ’त्किनुको साथै र क्ष’तिग्रस्त भएको बताइएको छ ।बिहान सबेरै आएको यस भू’कम्पमा परी सु’लावेसी द्वीपका सयौँ व्यक्ति घा’इते भएका जनाइएको छ । यस द्वीपमा साढे दुई वर्षअघि आएको भू’कम्प र सु’नामीमा परी हजारौँ व्यक्तिको मृ’त्यु भएको थियो ।
सु’लावेसी द्वीपको मा’मुजु शरहमा मात्र यस भू’कम्पको कारण २६ जनाको मृ’त्यु भएको यहाँको प्रकोप नियन्त्रण विभागका प्रमुख अलि र’हमान बताएका छन् । भवनको भ’ग्नावशेषमा अझै पनि व्यक्तिहरु पु’रिएको अनुमान गरिएको छ ।त्यसैगरी मा’मुजु शहरबाट निकै टाढा रहेको दक्षिणी क्षेत्रमा भू’कम्पको कारण आठ व्यक्तिको मृ’त्यु भएको छ । दुबैतर्फ गरी ३४ जनाको मृ’त्यु भएको प्रकोप नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । उ’द्धारकर्ताहरुले मा’मुजु अस्पतालको भ’ग्नावशेषमा उ’द्धारकार्य जा’री राखेका बताइएको छ ।
यस अस्पतालको भ’ग्नावशेषमा बि’रामी र अपस्पालका कर्मचारी गरी करिब दश जना पु’रिएका अनुमान गरिएको छ ।भू’कम्पको कारण भएको धनजनको क्ष’तिलगायतका विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन । अहिले प्र’भावित क्षत्रेमा उद्’धारकर्मी पुगेका छन् । सन् २०१८ मा इन्डोनेसियाको सु’लावेसी र पा’लुमा आएको ७।५ म्या’ग्नीच्युडको भूकम्प र त्यसपछिको सु’नामीमा परी ४ हजार ३०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृ’त्यु भएको थियो ।सन् २००४ को डिसेम्बर २६ मा गएको ९.१ म्या’ग्नीच्युडको भूकम्प र त्यसपछि आएको श’क्तिशाली सु’नामीमा परी २ लाख २० व्यक्तिको मृ’त्यु भएको थियो । त्यसमा एक लाख ७० हजार इ’न्डोनेरियाली ना’गरिक रहेका थिए ।
हिमपातको पी’डा : लिमी गाउँ पाँच महिनाका लागि ब’न्द
स्वेताको भव्य बिहे भोज, सिउँदोमा सिन्दुरले सजिएर श्रीमानको हात समाउदै आईन…भिडियो